I-FAQ - The Kdom
Abahlanganyeli beKmultine NAMERCHANTS WAMAKHAYA NABAYEZIJEWELRY UKUZE BENZE UKUZE KUKUVUSELELE IZINHLELO ZAKHO KAKHULU KANYE NESIVIVINYO SOKUXHUMANISA IGLOBAL.
Umgomo wethu ukukunikeza izindlela ezinhle kakhulu zokuthumela, noma ngabe uhlala kuphi. Nsuku zonke, sinikezela kumakhulu amakhasimende amakhasimende emhlabeni wonke, siqinisekise ukuthi sinikeza amazinga aphezulu kakhulu okuphendula kuwe ngaso sonke isikhathi.
Okwamanje, sinikeza Ukuthumela MAHHALA Emhlabeni Wonke on bridge izinto esitolo sethu.
Q: Ngabe Izinto Zami Zithunyelwa Kanjani?
Noma yimiphi imikhiqizo efana nezicathulo, izikhwama, yathunyelwa ivela e-Asia. Yize imikhiqizo yethu ivela e-Asia, ikhwalithi igqamile, izikhathi zethu zokuthumela ziyancintisana futhi amanani ethu awanakuphindeka.
Yonke eminye imikhiqizo efana nalezi zingubo eziphrintiwe (izikibha, amahembe, ama-hoodies, amacala wefoni, njll) zithunyelwa ngqo kusuka kubahlinzeki bethu ku I-united states.
Izinto zethu zokuphrinta ngokwezifiso zithunyelwa nazo I-DHL EXPRESS!
Q: Yiziphi Izikhathi Zokulethwa Ezilinganisiwe Ku-oda Yami?
Imikhiqizo ephambili (T-Shirts, Sweatshirts, Hoodies, Amajakethi, Ama-Mouth Masks, Backpacks, imigexo, namasongo, izindandatho, amacala wefoni)
Isikhathi Sokukhiqiza: Izinsuku ezingama-2-4
I-US, UK, CA, Izilinganiso Zesikhathi Sokulethwa kwe-AUS: Izinsuku eziyi-12-25 (EMS Nge-Destination Tracking)
I-US, UK, CA, i-oda yomkhiqizo enkulu ye-AUS engafikanga phakathi kwezinsuku ezingama-60 zokucutshungulwa kwama-oda kufanelekile ukubuyiselwa imali noma ukubhukelwa mahhala.
Ukulinganiswa Kwesikhathi Sokulethwa Komhlaba Wonke: Amaviki angu-2-4 (Akubandakanyi Ukulandelwa Kwendawo Yokugcina)
Ama-oda aphesheya angafiki kungakapheli izinsuku ezingama-60 zokucubungulwa kwama-oda afanelekile ukubuyiselwa imali noma ukubuyiselwa kwemali kwamahhala.
Ukulinganiswa Kwesikhathi Sokulethwa: Izinsuku eziyi-10-14 (DHL Nge-Destination Tracking)
Noma yimaphi ama-oda womcamelo angakafiki zingakapheli izinsuku ezingama-45 zokucutshungulwa kwe-oda ayakufanelekela ukubuyiselwa imali noma ukubuyiselwa kwemali kwamahhala.
Noma yimaphi ama-oda we-tote indwangu angakafiki zingakapheli izinsuku ezingama-45 zokucutshungulwa kwe-oda afanelekile ukubuyiselwa imali noma ukubuyiselwa mahhala.
I-US, UK, CA, Izilinganiso Zesikhathi Sokulethwa kwe-AUS: Izinsuku eziyi-10-25 (EMS Nge-Destination Tracking)
I-US, UK, CA, i-AUS crew sock oda engakafiki zingakapheli izinsuku ezingama-45 zokucutshungulwa kwe-oda ifanelekile ukubuyiselwa imali noma ukubuyiselwa mahhala.
Izilinganiso Zesikhathi Sokulethwa Kwamazwe Ngamazwe: Amaviki angama-2-4 (Akufaki Ukulandela umkhondo Wokugcina)
Ama-oda ama-sock crew angakafiki zingakapheli izinsuku ezingama-60 zokucutshungulwa kwama-oda afanelekile ukubuyiselwa imali noma ukubuyiselwa mahhala.
Izikhwama ze-Leather Tote nezikhwama
Isikhathi Sokukhiqiza: Izinsuku ezingama-4-6
Noma yimaphi ama-oda esikhwama angafiki kungakapheli izinsuku ezingama-45 zokucubungulwa kwama-oda afanelekile ukubuyiselwa imali noma ukubuyiselwa kwemali kwamahhala.
Izikhwama zeSadv Saddle
Isikhathi Sokukhiqiza: Izinsuku ezingama-5-7
Noma imaphi ama-oda wezicathulo angakafiki zingakapheli izinsuku ezingama-45 zokucubungulwa kwama-oda afanelekile ukubuyiselwa imali noma ukubuyiselwa kwemali kwamahhala.
Q: Ngizoluthola Nini Ulwazi Lokulandelela Ku-oda Lami?
Izinombolo zokulandelela zizokwenziwa zitholakale ngaphakathi kwezinhlaka zesikhathi ezichaziwe ezingezansi futhi zizothunyelwa ngokuzenzakalelayo kumakhasimende nge-imeyili enikezwe ngokulandelana kwayo.
I-Pillow Covers: Izinsuku ezingama-5-7 ngemuva kokucutshungulwa kwe-oda.
Indwangu Tote Izikhwama: kwezinsuku 5-7 emva oda ukucutshungulwa.
Crew Amasokisi: izinsuku ezingama-5-7 ngemuva kokucutshungulwa kwe-oda.
Isikhumba Tote Izikhwama: izinsuku 7-10 emva oda ukucutshungulwa.
Amahlombe Ezikhwama: Izinsuku eziyi-7-10 ngemuva kokucubungulwa kwe-oda.
Izikhwama ze-Canvas Saddle: izinsuku ezingu-7-10 ngemuva kokucubungulwa kwe-oda.
Ama-Canvas Shoes: izinsuku ezingu-7-10 ngemuva kokucubungulwa kwe-oda.
Umphumela: Izinsuku ezingama-5-7 ngemuva kokucubungula i-oda.
Q: Kungani Kungeyona idatha Yokulandelela Ekhonjiswa Kwinombolo Yami Yokulandelela?
Okwezinombolo ezilandelwa ukulandela i-oda lase-US kungathatha izinsuku ezingama-7 ngemuva kokuthi kucutshungulwe i-oda lokulandela idatha. Qiniseka ukuthi usebenzisa inombolo efanelekile yokulandelela futhi uyakwazi ukuyilandelela thekdom.com/pages/track-your-order
Izinombolo zokulandelela ama-oda omhlaba zingathatha izinsuku ezifika kwezingu-10 ngemuva kokuthi i-oda selicutshunguliwe ukuze kuboniswe idatha yokulandelela. Qiniseka ukuthi usebenzisa inombolo efanele yokulandela ngomkhondo futhi ungayilandelela thekdom.com/pages/track-your-order. Yaziswa, ama-oda aphesheya awabuyiswa uma esethunyelwe futhi ngeke akhombise idatha yokulethwa lapho uya khona.
Q: Ngingathanda Ukushintsha / Ukukhansela i-oda, Ngikwenza kanjani lokho?
Sisebenza ekuthengiseni KONKE kuyinqubomgomo yokugcina. Lokhu kusho ukuthi ngeke ukhansele, ubuyise, noma uthole ukubuyiselwa kwemali nge-oda ngaphandle kokuthi kube yiphutha ekugcineni kwethu.
Ungafunda kabanzi ngenqubomgomo yethu yembuyiselo lapha.
Q: Angijabule Ngosayizi Wezicathulo Futhi Ngifanele. Kumele ngenzeni?
Esimweni esivelakancane sokuthi ikhasimende lingakujabuleli ukulingana kwezicathulo zabo, sizocubungula ukushintshana kwamahhala kwekhasimende elilodwa.
Ukubuyiselwa kwemali ngeke kunikezwe izingxabano zokususa, kuvunyelwe kuphela ukushintshana.
Ukuhwebelana kwamahhala kuzovunyelwa kanye kuphela nge-oda elilodwa lesicathulo. Noma yiziphi izindleko ezihlobene nokushintshaniswa esedlule okuthengiselana kwamahhala kokuqala kufanele zimbozwe ikhasimende.
Ukuze kuqhutshwe ukushintshaniswa kwamahhala, amakhasimende kufanele ahlinzeke imininingwane elandelayo:
Isizathu sokuthi isicathulo besingavani (ie sincane kakhulu, sikhulu kakhulu, sincane kakhulu)
usayizi omusha ocelwe ikhasimende
igama lekhasimende nenombolo ye-oda
Ngeke uze ucelwe ukuthi ubuyise izicathulo zokuqala ukuze uthole ukushintshwa kwamahhala ngaphansi kwale nqubomgomo.
Ukuze sinciphise ubungozi bezinkinga zokusayizi, sinikeze ngamashadi wokubonisa usayizi wamakhasi wokucaciswa kwemikhiqizo yethu izicathulo zikanokusho, amabhuzu we-suede.
Izicelo zokushintshana ngosayizi ezehluka ngosayizi abangaphezulu kokungu-2 kusuka kosayizi woqobo o-odwa zizobhekwa njengephutha lokufaka kwamakhasimende futhi ngeke zikufanele ukushintshaniswa.
Q: Isithi Ikheli Lami Alitholakali
A: Sithumela sisebenzisa i-United States Post Office. Uma unebhokisi le-PO futhi ungatholi imeyili ekhelini lakho lendawo, kufanele usebenzise ibhokisi le-Po. Ukuqinisekiswa kungakhohlisa kwizifinyezo ezithile futhi. I-USPS.com "thola ikhodi ye-zip" ingakusiza ekutholeni izifinyezo zakho ezithile nokuthi i-USPS izoliqinisekisa kanjani ikheli lakho.
Q: Angiqondi Ishadi Lakho Lokulinganisa Shirt.
A: Uma ubeka ihembe lakho njengamanje, eluntofontofo futhi ulinganise ngaphansi kwemikhono, uzokwazi ukuthola okuthile okusondele kakhulu eshadini lethu elizokusebenzela. Khumbula, izilinganiso ezikweshadi ezenzelwe ihembe, hhayi umuntu ohloselwe ukuligqoka.
Q: Ngiyibuyisa kanjani noma ngiyishintshe kanjani ihembe lami?
A: Sicela usithumele i-imeyili ku-support@thekdom.com futhi usazise ukuthi inkinga iyini! Sizosebenza nawe ukulungisa inkinga. Uyacelwa ukuthi ukhumbule, lawa amahembe awashicilelwa ngokwezifiso, enziwa ngoku-oda. Uma sesiphrintiwe, ngeke sikwazi ukukuphrinta noma ukubuyisela esitokisini. Ngakho-ke, sizozama ukufeza okuthile ukuqinisekisa ukuthi wanelisekile ngokuthenga kwakho!
Uma ukubuyiselwa kwemali kunqunyelwe ukuthi kuvunyelwe, sizocubungula imbuyiselo ngentengo yasekuqaleni yehembe ngokushesha okukhulu. Ukubuyiselwa kwemali ngokuvamile kuthatha izinsuku zebhizinisi eziyi-1-3 ukucubungula uma sesizikulile. Uma ungathanda ukwenza ukushintshaniswa sicela uqinisekise ukufaka imininingwane yokukhokha yokuthumela okubuyayo.
Q: Kukhona Uhlaka Olwehlulekile Oluzungeze Umklamo Wami Wehembe.
A: Amanye amahembe aselashwa ngaphambi kokuphrinta. Ungakhathazeki, kuzonyamalala okokuqala ukugeza ihembe.
Q: Wenze iphutha nge-oda lami.
A: Siyaxolisa kakhulu. Akwenzeki kaningi, kepha akekho ophelele. I-imeyili support@thekdom.com futhi sizosebenza nawe ukulungisa lokho. Imvamisa, lokhu kuzodinga nje ukuthi usithumele isithombe sephutha esilenzile ukuze sikwazi a) uqinisekise isimangalo sakho bese b) sikubiza ukuze usilungise.
Q: Ngi-ode izinto ezi-2+, kepha ngathola eyodwa kuphela ... iphi i-oda lami?
Sine-assortment enkulu yemikhiqizo engagcinwanga endlini. Ngakho-ke, lapho u-oda izinto eziningi ngasikhathi, zingathunyelwa ngokuhlukile ukuze zifike kuwe ngokushesha. Ungathola into eyodwa ngaphambi kwelandelayo, ngakho-ke ngicela ungatatazeli uma ungazitholi zonke izinto zakho ngasikhathi sinye, vele ukhumbule ukuthi zisendleleni!
Q: Ngazi kanjani ukuthi le webhusayithi iphephile?
Sivikelwe yiShopify, ipulatifomu eyaziwayo ye-E-Commerce. Futhi, siqinisekisa ukuphepha okuphephile nokuphephile. Izinkokhelo zenziwa nge-Shopify ngokusebenzisa izinkampani ezinkulu zamakhadi eziboniswe esithombeni esingezansi. Asinakho ukufinyelela kunoma yiluphi ulwazi olumayelana nawe noma ikhadi lakho.